Ukuphononongwa kunye namanqaku kwindumiso yokudinwa nguCarl Honoré -Ikaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Indumiso yokuhamba kancinci kukaCarl Honoré
Andiyithandanga le ncwadi kwaye andiyicebisi. Ndiqala ndomelele. Kubi kakhulu ibikukuqala kwam ukufunda unyaka. Kwaye oku kuyenzeka kum ngokungawuqali unyaka ukufunda Ukuba luncedo kokungenamsebenzi, isiko leminyaka emi-2 ukuba andizukuyeka.
Ngokuphathelele incwadi kaHonoré, ndicinga ukuba inesiqingatha samaphepha ashiyekileyo. Kudala ndenza ingxoxo malunga nokuba ndibhale olu hlaziyo okanye hayi, kodwa kuba kuhlala kukho izinto ezintle, ndibashiya apha zibhalwe phantsi kwixesha elizayo ndifuna ukuphonononga isihloko esitsalileyo. Ngamana le bhulogi ingaba yimemori yam.
Indumiso yokuhamba kancinci. Intshukumo yomhlaba wonke icela umngeni kwihlelo lesantya
Sele nditshilo, njengencwadi Ndiyifumana iphindaphindeka. Ezininzi. Ndicinga ukuba uyenzile inde kakhulu kuba uphinda-phinda iimpikiswano ezifanayo kwisahluko ngasinye nakwincwadi yonke. Ewe ukubeka imizekelo eyahlukeneyo kodwa kuhlala kusekwe kwinto enye.
Incwadi iqala ukulukuhla. Zonke ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci zikwi-rush. Ukuqala kubonakala njengesityhilelo, ngengxoxo ephakathi. Awunyanzelekanga ukuba wenze uguquko olukhulu kuhambo olucothayo, kodwa cotha nje kancinci kwimisebenzi ethile, njl.
Kwaye le yinto endivumayo ukuba iyakulunga kuthi sonke.
Kodwa ukusukela apha ukuya phambili uyiphinda-phinda kaliwaka ngokujikeleza iindawo ezohlukileyo ezahlulahlula incwadi.
Zonke zizinto ezinengqiqo, ekunokwenzeka ukuba asikaze siyeke ukucinga ngazo, kodwa esivumelana ngazo sonke.
Ukuba ufuna isincoko esonwabisayo jonga Ubuzwilakhe bonxibelelwano lifakwe ngu-Ignacio Ramonet. Umdala kancinci, kodwa uyakhuthaza kakhulu.
Eyona ncwadi imbi kunazo zonke
Ngokuqinisekileyo iyenzeka kwicandelo lamayeza, apho ezinye iindlela zonyango ziyakhuthazwa njengenketho endaweni yamayeza. Kwaye kulapho incwadi yaphuke khona, kuba ukubona indlela ebekwe ngayo kulo mbandela kundenze andathembi yonke into eyithethayo.
Nokuba iphindaphindwe okanye ayiphindaphindwanga, andisazi ukuba iphi umlingo nalapho izibakala eziqinisekisiweyo. Ke iyekile ukunomdla kum.
Amanqaku kunye namaxwebhu okuhlaziywa
Ezinye zezihloko athetha ngazo nemizekelo zezi:
Ukugqiba ndilushiya olu xwebhu oluyi Ileta evela kuHarry Lewis eya kubafundi bakhe baseHarvard. Ibizwa ngokuba sisihloko Nciphisa phantsi: Ukufumana okungakumbi kwiHarvard ngokwenza okungaphantsi.
Khange ndiyifunde kodwa ndiyifumene inomdla. Ngokukhawuleza ukuba ndiyifunde, ndiyabuya ndihlaziye ukungena. Ukuba ufuna ukuyifunda ungayikhuphela kwi Kwiwebhusayithi yaseHarvard okanye kwi-Ikkaro
Iphepha likaHarvard likaHarry Lewis SlowdownUkukhuphela
Ukuba ufunde incwadi ka-Lewis okanye iphepha, shiya uluvo kwaye undixelele ukuba ucinga ntoni.
1 Indumiso yokuhamba kancinci. Intshukumo yomhlaba wonke icela umngeni kwihlelo lesantya
2 Eyona ncwadi imbi kunazo zonke
3 Amanqaku kunye namaxwebhu okuhlaziywa